သင့်ကလေးကိုအင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ် | USAHello | USAHello
Lingokids ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ဂိမ်းများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုမယ့်ဘာသာစကား-သင်ယူမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာသုံးနိုငျ. ဒါဟာကူညီပေးခဲ့တယ်9သန်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူ. သင့်ကလေးအခမဲ့ LingoKids ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ.
သငျသညျအကြားသူသည်ကလေးတစ်ဦးလဲသိလား2နှင့် 8 အသက်အနှစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့လိုသည်? USAHello နှင့် Lingokids ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအခမဲ့အတန်းကွာပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း. အကြှနျုပျတို့သညျကိုသိအမြိုးသားအအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ကူညီပေးလို.
Lingokids မှတစ်ဦးကကြေးပေးသွင်း app ကိုအတွင်းအင်္ဂလိပ်အဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာသီချင်းများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသင်ယူဖို့ဂိမ်းပါဝင်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၏သားသမီးတို့အဘို့သင်ယူလေးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်. သင့်ကလေးကို app ကိုနှင့်အတူကစားခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများလေ့လာလို့ရပါတယ်. အက္ခရာ-သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစောပိုင်းစာဖတ်ခြင်းသင်ခန်းစာတွေလည်းရှိပါတယ်.
သင်သည်သင်၏သားသမီးများကကူညီနိုင်သည်သို့မဟုတ်မိမိတို့အပေါ်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. မိဘများကသူတို့ကလေးကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဘယ်အရာကိုမြင်ရန် In-app ကိုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်. မိသားစုတစ်စုလုံးအတူတကွလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်သင် print ထုတ်နိုင်ပါတယ်စာမျက်နှာများရှိပါတယ်.
သင်နှင့်သင့်သူငယ်၏အဆုံးတိုင်အောင်အ Lingokids ကိုသုံးနိုင်သည် 2019. သင်သည်သင်၏ကလေး၏ဆရာ Lingokids အသုံးပြုလိုမယ်လို့ထင်ခဲ့လျှင်, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့အကြံပြုကျေးဇူးပြုပြီး. သင်တို့သည်လည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေသောမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဤသတင်းအားမျှဝေနိုင်ပါတယ်, ဒုက္ခသည်များ, နှင့် asylees. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ငါပေးမည်, လွန်း.
အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ဘို့, info@usahello.org မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့. ငါတို့သည်သင်တို့ညွှန်ကြားချက်အစုတခုနှင့်သုံးစွဲဖို့ကုဒ်တခုပို့ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ဘာသာစကားမြားစှာသို့ညွှန်ကြားချက်ထားသော. သငျသညျဘာသာပြန်ထားသောညွှန်ကြားချက်ချင်လျှင်, မေးပါကျေးဇူးပြုပြီး.